» ‘गुड बाई’ कमरेड खड्ग प्रसाद ओली
‘गुड बाई’ कमरेड खड्ग प्रसाद ओली
२०७८ जेष्ठ १२, बुधबार १४:३८
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको ७१ बर्षको इतिहासमा २ जना यस्ता पात्रलाई यो कम्युनिष्ट आन्दोलनले भोग्न पर्यो । ति पात्र हुन केशरजङग रायमाझाी र के पी शर्मा ओलि । आज भन्दा ५ बर्ष पहिले नेकपा(एमाले)को ९ औ महाधिबेशनबाट नेकपा(एमाले)को अध्यक्षमा ओली विजय हुनु नै नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीमा कालो बादल लाग्नु हो । ओली शक्ति र सत्ताको लागि जुन सुकै मुल्य चकाउन पनि पछि पर्दैनन भन्ने कुरा २०७४ सालमा भएको चुनाबमा नेकपा माओबादीसँग चुनावी तालमेलबाट थाहा हुन्छ ।
पपार्टी एकता एकता आफु सत्तामा पुग्नको लागि मात्र हो भन्ने कुरा आज प्रमाणित भएको छ। ओलीले पार्टीमा रहेका कुनै पनि सदस्य वा कमिटिमा छलफलै नगरि पार्टी एकता गरे, जुन कुरा दिगो थिएन । किनकि त्यहाँ ओलि कमरेड र प्रचण्ड कमरेडको सत्ता लेनदेनको कुरा थियो, त्यो लेनदेन यि दुबै पात्र आफु बाहेक कसैले थाहा नहोस भन्ने चाहन्थे । जब ओलीको कार्यकाल सकिन लाग्यो, त्यसपछि यो कुरा बाहिर आयो । जब चुनाबी टिकट बवतरणको कुरा आयो, केपि ओली र प्रचण्ड मिलेर माधव नेपालसँग नजिक रहेका नेता कार्यकर्तालाई पाखा लगाउने मात्र नभई जगन्नाथ खतिवडा र निरज आचार्यहरुको टिकट बाटो बाटै खोसियो र ओलीले अष्टलक्ष्मि शाक्य, भिम आचार्य, युवराज ज्ञवाली, बेदुराम भुसाल भन्दा नजिक युवराज खतिवडा, मोतिलाल दुगड, कोमल ओलीहरुलाई नजिक देखे । ओली बारम्बार भन्ने गरेको भ्रष्टचारीको मुख पनि हेर्दिन भनेर नथाक्ने ओली भ्रष्टचारमा चुर्लुम्म डुबे ।
ओली प्रधानमन्त्री भएपछि सम्पति शुद्दिकरण बिभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगाएतका निकायहरु आफ्नो मातहतमा राखेर आफुलाई सुरक्षित महशुस गरे । उनले चुनाबमा २ बर्षमा पानी जहाज, ३ बर्षमा रेल, शिक्षा र स्वास्थ्य निः शुल्क, ५ बर्षमा ५० लाख युवालाई रोजगारी दिन्छु जस्ता खोक्रा भाषण दिए । आज ओलीको जस्ले स्तुति गान गाउँछ, त्यसले नियुक्ति खान्छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो गुरु भट्टराई, सुशिल भट्ट, कोमल ओलि मोतिलाल दुगडहरू आज नेपाल ट्रस्टको जग्गा प्रकरण, गुठि बिधेयक, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, ओम्नि, यति, दुगड, सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्डको भ्रष्टचार र जनतासंगँ जोडिएको कोभिड भ्याक्शिनमा भएको भ्रष्टाचारमा ओलीले निदाएर समर्थन गरेका छन्। यदि गोकुल बास्कोटाको ठाउँमा अर्को पात्र भएको भए ओलीले के गर्थे होला ? तर आज गोकुल बास्कोटा ओलीको संरक्षणमा बाल्कोटमा नयाँ महल बनाएर बसेका छन् ।
जनता कोरोनाको कारण रोग र भोकले मरिरहंदा ओलीले गिज्याएर बसे, पहिलो लकडाउनमा जनता १५ दिन पैदल हिडेर आफ्नो गन्तब्यमा जादा ओलीले खिसि टिउरि गरे । पुलिसले देख्दैन पत्रकारले कहाँ बाट देख्छ भनेर मजाकको बिषय बनाए । खुल्ला मन्चमा बिभिन्न संस्थाहरुले जनतालाई खाना खुवाउदा फोटो खिचाउन तमाशा गरे भनेर बोले । आइशोलेशनमा राजु सदाको जिवनजल नपाएर मृत्यु भयो । पहिलो लकडाउनको अवधिमा ८० भन्दा बढि मान्छेको उपचार नपाएर ज्यान गयो जनताको गाँस, बास, कपासको अधिकार यो सरकारले खोसिदियो । भोकले छटपटाएको जनता प्रहीको लाठि खान बाध्य भए ।
ओलीको अनुहारमा हेर्यो भने अपराध, भ्रष्टचार, अंहकार, रुखो कमेडियन मात्र देखिन्छ यो सम्मको क्रुरतालाई ईतिहासले पक्कैमाफि गर्ने छैन। भारतमा दोस्रो भेरियन्ट चलिरहंदा अम्बाको पात र बेशार पानीको उखान टुक्का हालेर बसे । पशुपतिमा गजुर राख्न तिर लागे । राम र अयोध्याको बालुवाटारबाट चितवन सम्मको रथ यात्रा गर्न तिर लागे । आज देशमा अक्शिजन,भेन्टिलेटर र अस्पताल जान नपाएर दिनहु २०० मान्छेको मृत्यु भएको छ । यो मृत्यु होइन राज्यले गरेको हत्या हो। आज झापामा २ अर्बको भ्युटावर बनाउनुको सट्टा ७७ जिल्लामा अक्सिजन पलान्ट राखेको भए यति जनता मर्ने थिएनन् ।
एक करोड ५० लाखमा एउटा अक्सिजन प्लान्टले दैनिक १०० सिलिण्डर उत्पादन गर्दा पनि जम्मा लगानि १ अर्ब १५ करोड ५० लाख मात्र लगानी हुन्छ । अहिले जनता रोग र भोक ले मरिराखेका छन् तपाई सत्ता जोगाउन दिनरात सितल निवास धाउनु भएको छ । संबिधान मास्न अनेक हत्कण्डा अपनाउनु भएको छ । आफु सत्तामा टिक्न राष्ट्रपति जस्तो संस्थालाई बदनाम गर्नु भएको छ, प्रधानमन्त्री हुनको लागि साम्सद अपहरण, प्रतिनिधि शभा बिघटन, दल बिभाजनको अध्यादेश ल्याउँदा पनि नपुगे पछि नागरिकता बिधेयक अध्यादेशबाट जारी गरेर भारतलाई खुसि बनाउने र सत्ता टिकाउने खेलमा लाग्नु भएको छ ।
यो नै तपाईको पतन हो, कमरेड तपाईले भारतले गरेको नाकाबन्दिमा देखाएको नक्कलि राष्ट्रबाद आज प्रमाणित भएको छ। कमरेड हामी तपाईसँग जतिदिन यात्रा गर्यौ, त्यो दुःखद नै भयो किनकि तपाईले बोलेका सबै झुट कुराहरु भोटको लागि हामीले पनि झुट बोलिएछ । त्यसको लागि सार्बजनिक रुपमा नागरिकसँग माफि माग्छौ । तपाईले पहिलो प्रतिगमन गरेर नेकपा फुटाउनु भयो र दोस्रो प्रतिगमनबाट एमाले । यो पार्टी तपाई १४ बर्ष जेल बसेर बनेको थिइन, तपाईका उखान टुक्काले बनेको थिएन । यो पार्टि बनाउन धेरै नेता कार्यकर्ताको पशिना बगेको छ । तर तपाई जति दिन सत्तामा बस्नु हुन्छ, त्यति नै देश जनता र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई नोक्सानी हो ।
हिजो देखि नै सरकारको प्रतिपक्ष भनेको नेकपाको ईमान्दार कार्यकर्ता थिए, जब प्रश्नको मुख छोपिन्छ त्यसपछि दलको अवश्था हुने भनेको यस्तै हो। कमरेड तपाईलाई साथ दिन र सगैँ यात्रा गर्न नसके पनि तपाईसँग ईश्वर पोख्रेल, गोकुल बास्कोटा, महेश बस्नेत, बिष्णु पौडेल, दिपक मनाङगे, सुर्य थापा, मोतिलाल दुगड, कोमल ओलि नव प्रवेशि तपाईको भासामा हत्यारा राम बहादुर थापा बादल टोप बहादुर रायमाझिहरु सहितको सबै बिधा सम्हाल्न सक्ने टिम छ । स्वभाब मिल्ने समुह हजुर संगै छ । हजुरलाई चुनाबमा साथ दिन कमल थापा र महन्त ठाकुरहरु लाईनमा नै छन् । हुनत अस्ति भर्खर हो क्यारे म उभिएको ठाउमा ५१ लाख भोट आउछ भनेर भनेको पनि । जे होस कमरेडलाई शुभकामना छ। अब तपाई र हामी अलग बाटोमा लाग्यौं, कमरेड गुड बाई………………………………….
– लेखक माधव नेपाल समुहको युवा संघ, नेपालका सचिव हुन् ।